प्राधिकरणको घाटा घट्यो - अर्बौंको घाटा अब करोडमा - मूल्याङ्कन अनलाइन
भदौ १, काठमाडौँ । विसं २०५९ देखि निरन्तर घाटामा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा करिब रु. ७ अर्ब घाटा कम गरेर रु. ९७ करोड ८९ लाखमा सीमित गरेको छ ।
प्राधिकरणको ३२औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा दिइएको जानकारीअनुसार आव २०७३/७४ मा कूल आय वृद्धि रु. ५० अर्ब २२ करोड ९४ लाख हुन पुगेको छ । गत आवमा विद्युत् बिक्रीबाट रु. ३५ अर्ब ७ करोड ३५ लाख मात्रै आर्जन गर्न सकेको थियो । आव २०७२/७३ मा सञ्चालन नोक्सानी रु. ३ अर्ब ६ करोड ३९ लाख रहेकामा आव २०७३/७४ मा रु. २ अर्ब ४० करोड ७३ लाखमा सीमित हुन पुगेको छ ।
प्राधिकरणले निजी क्षेत्र र भारतबाट विद्युत् खरिदबाट रु. २८ अर्ब ४५ करोड ७३ लाख भुक्तानी गरेको छ । उपलब्ध विद्युत्को कूल परिणाममध्ये खरिद ऊर्जाको परिणाम ६३.१६ प्रतिशत भई विद्युत् बिक्रीबाट प्राप्त रकमको ६१.६७ प्रतिशत भुक्तानी गरिएको छ ।
वार्षिक मूल्यवृद्धिका कारण विद्युत् खरिद लागत २७.४३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सञ्चालन खर्च उत्पादनतर्फ रु. १ अर्ब ८२ करोड ३९ लाख, प्रसारणमा रु. १ अर्ब ९० करोड ७१ लाख, प्रशासनतर्फ रु. १ अर्ब ३० करोड ६७ लाख रहेको छ ।
प्राधिकरणले मुलुकभर सञ्चालन गरेको चुहावट नियन्त्रण अभियान सार्थकरुपमा अगाडि बढ्दा करिब ३ प्रतिशत विद्युत् चुहावट कम भएको छ । गत आवमा २५.७८ प्रतिशत चुहावट रहेकामा आव २०७३/७४ मा चुहावट २२.९० मा सीमित गर्न सफल भएको छ । एक प्रतिशतमात्रै चुहावट घटाउँदासमेत रु. एक अर्ब बराबरको नाफा आर्जन गर्न सकिने विज्ञको भनाइ छ ।
उनले प्राधिकरणका कार्यालय उपभोक्तामैत्री नभएको, मिटर पाउन कर्मचारीलाई घुस खुवाउनुपर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएको, ट्रान्सफर्मरमा समस्या आए मर्मत गर्न लामो समय लाग्ने गरेको तथा सेवाग्राहीलाई राम्रो व्यवहार नभएको जस्ता गुनासा विद्यमान रहेकाले ती समस्या तत्काल हटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्राधिकरणको नाममा गरिने राजनीतिक बेइमानी र ट्रेड युनियनको अराजक व्यवहारसमेत अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री शाहीले भने, “कर्मचारीको हितबाहेक अन्य विषयमा बढी जान्ने सुन्ने भएर व्यवहार गरे उनीहरु समेत कारबाहीको दायरामा आउँछन् । ट्रेड युनियनलाई अब विगतमा जस्तो छाडा छोडन सकिँदैन ।”
ऊर्जा सचिव एवं प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायले गत हिउँदमा विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्यौँ भनेर मख्ख परेर बस्न नहुने धारणा राखे । प्राधिकरणका आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराईले प्राधिकरणको कर्मचारी भएको पछिल्लो समय समाजमा प्रतिष्ठा बढेको भन्दै घिसिङ नेतृत्वको प्राधिकरणले गरेको सुधार प्रशंसायोग्य रहेको बताए ।
« सिरहाका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा निःशुल्क घुम्ती स्वास्थ्य शिविर (Previous News)
(Next News) यथास्थितिमा रमाएर बसेकाहरुबाट नयाँ कुरा आएन र आउँदैन पनि- शिव फुयाल »